Wararka - Cosmoprof Worldwide Bologna
Magacaabista daabacaadda 53-aad ee Cosmoprof Worldwide Bologna ayaa dib loo dhigay illaa Sebtember.
Munaasabada ayaa dib loo balamay laga bilaabo 9 ilaa 13 Sebtember 2021 , marka la eego xaaladda degdegga ah ee caafimaadka ee ku sii fida fiditaanka cudurka 'covid19'.
Go’aanka ayaa ahaa mid xanuun badan laakiin loo baahnaa. Dunida oo dhan waxaan ka fiirineynaa daabacaada soo socota iyadoo laga filaayo waxyaabo aad u waa weyn, sidaa darteedna waa lagama maarmaan in la hubiyo in munaasabaddu ay ku socoto xasilooni iyo badbaado guud.
Cosmoprof Worldwide Bologna, oo la aasaasay 1967, waa bandhig caan ah oo caan ku ah noocyada quruxda adduunka. Waxay leedahay taariikh fog waxayna ku raaxeysaneysaa sumcad sare. Waxaa si joogto ah loogu qabtaa Xarunta Bandhigga Caalamiga ee Cosmoprof oo ku taal Bologna, Talyaaniga sannad kasta.
Carwada quruxda badan ee Talyaanigu waxay caan ku tahay adduunka oo dhan tirada shirkadaha kaqeyb galaya iyo noocyada kala duwan ee wax soo saarka, waxaana lagu soo bandhigay buuga caalamiga ah ee Guinness World Book oo ah carwo qurux badan oo awood leh. Inta badan shirkadaha quruxda badan ee adduunka hogaamiya ayaa halkan ka dhistay waabab waaweyn si ay u soo saaraan wax soo saar iyo farsamooyin cusub. Marka laga soo tago tiro badan oo badeecooyin iyo teknoolojiyad ah, bandhiggu wuxuu sidoo kale si toos ah u saameeyaa isla markaana abuuraa isbeddellada isbeddellada adduunka, iyadoo la sii wadayo xirfadda joogtada ah iyo muuqaalka caanka ah
Cosmoprof Worldwide Bologna waa carwada loo sameeyay si loo cabiro: 3 hoolal oo loogu tala galay qaybo gaar ah iyo kanaallo qaybinta oo u furan kana agdhaw dadweynaha taariikhaha kaladuwan si loo fududeeyo booqashooyinka wadayaasha loona kordhiyo fursadaha kulanka iyo ganacsiga.
COSMO Timaha, Ciddiyaha & Salon Qurxinta waa salon caalami ah oo leh dariiqa ugu habboon ee loogu talagalay qeybiyeyaasha, milkiileyaasha iyo hawlwadeennada xirfadleyda ah ee xarumaha qurxinta, fayoobaanta, isboortiga, hôtellerie iyo qurxinta timo qurxinta. Soo bandhigid ka timid shirkadaha ugu fiican ee keenaya alaabada, qalabka, qalabka guryaha iyo adeegyada loogu talagalay adduunka xirfadeed ee timaha, ciddiyaha iyo qurxinta / isboortiga.
COSMO Cadar & Cosmetics waa bandhig caalami ah oo leh dariiq loo habeeyay iibsadayaasha, qeybiyeyaasha iyo shirkadaha xiisaynaya wararka ka imanaya adduunka kanaalka tafaariiqda iyo waxyaabaha la isku qurxiyo. Soo bandhigid noocyada qurxinta ee ugu fiican adduunka ee awood u leh inay ka jawaabaan baahiyaha sii kordhaya ee sii kordhaya ee isbeddelka.
Cosmopack waa bandhigga caalamiga ah ee ugu muhiimsan ee loogu talagalay silsiladda wax soo saarka qurxinta ee dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay: alaabta ceeriin iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay, soosaarida qeybta saddexaad, baakadaha, codsadayaasha, mashiinnada, otomaatiga iyo xalka adeegga buuxa.
Waqtiga dhejinta: Feb-24-2021